I-Salads "I-Rainbow": imiyalelo ngeyathelo kunye neendlela zokupheka kunye nezithombe. Indlela yokwenza isaladi esilula kwaye ehleko "Rainbow" kunye nemifuno.
Umtsalane we-"Rainbow" isaladi kukuba unokulungiswa ukususela kwiphina isithako kwaye ihlala ilungiselelwe ngeendlela ezahlukeneyo. Oku kuvulela umnyango wokuzaliseka kwezinto ezingalindelekanga kunye neziqhamo ezicokisekileyo.
Isaladi esilula, esiphuthumayo kunye esheshayo "Rainbow"
Esi sidlo sidinga iimveliso eziqhelekileyo nezithengekayo, kwaye ukulungiswa kulula ukujamelana nomntu onokuhlangenwe nakho kuphela, kodwa kunye nentombazana ofuna ukukholisa umama nobawo kunye nesaladi eyenziwa nguwe.
i-beetroot - ii-2.
iklabishi ebomvu - 300 gr
iphepha - 1 pc
i-apula - 1 pc
i-mayonnaise - 1 tbsp
isardard dijon - 2 tsp
i-aple cider viniga-3 tbsp
ioli yomnquma - 4 tbsp
I-Worcestersky sauce - 1 tbsp
i-sauce isonka - 2 tsp
Imifuno kunye neziqhamo kufuneka zihlanjululwe kwaye zenziwe zibe yimida emine 3-4 cm ubude.
Kwisitya esincinci, hlanganisa zonke izithako ze-sauce, ixesha kunye nepilisi kunye netyuwa, uze ubethe ngokuchanekileyo ngemfoloko kude kube lula.
Beka imifuno kwisitya sokutya esinama-slides amakhulu kwaye usebenze kwitafile kunye nokugqoka kunye nama-walnuts aqoshiwe.
Indlela yokwenza umvuzo wemvula "Rainbow": iresiphi ngesithombe
Le saladi iya kuhobisa kunye netafile ehlaziyiweyo. Unako ukukhonza isitya kwindawo enkulu evulekileyo okanye kwiilazi zokukhonza.
I-scallops emanzini - 300 gr
ipepper ephuzi - ii-3
ibomvu elibomvu - ama-3 ama-pcs
i-asparagus - 300 gr
iklabishi ebomvu - iforki encinane
iitamatayi ezibomvu - 200 gr
utamatisi ophuzi - 200 gr
iviniga - 3 tbsp
ioli yomnquma - 3 tbsp
Igumbi lokudlela lwesardard - 1 tbsp
Geza yonke imifuno phantsi kwamanzi kunye nokumelela kwilinen yelinen yelinen.
Iklabishi nee-anyanisi ziqwengwe kakuhle, zinqunywe utamatisi, iinqumle zincinci, iipilisi ezinomqolo omude, kunye ne-asparagus - iibhloko ezincinci.
Kwisitya esingenanto esifihlayo sibeka zonke izithako kwiziqendu ngokulandelelana: i-patissons - i-pepper ephuzi - i-anyanisi - isarpus - iklabishi - i-pepper ebomvu - utamatisi obomvu - utamatato obomvu.
Kwisitya esincinci, hlangana iviniga, ibhotela kunye nesardadi, ityuwa, wongeza iziqholo ukuze uzonambitha kwaye udibanise kakuhle. Ngalolu lwakhiwo, hlafaza isaladi somnquba ukusuka phezulu uze uyithumele kwifriji 1 kwiyure.
Nciphisa i-anyanisi entwasahlobo ngaphambi kokukhonza.
Indlela yokulungisa isaladi "I-Rainbow" kunye nenkukhu yenkukhu: inkcazo-nyathelo yenkqubo
Ukudibanisa ukudibanisa kwenyama yenkukhu, ushizi ococekileyo, iisuthi kunye neziqhamo kunika esi sidizi inkumbulo engaqondakaliyo, kunye nokugqoka okwesonka kuyenza ibe yinto eqhelekileyo.
Ifayile yenkukhu - 250 gr
iidiliya - 300 gr
I-lettuce ye-Iceberg-2 i-tufts
I-Feta ushizi - 200 gr
ii-almond - 200 gr
i-blueberry - 250 gr
ioli yeoliva - 2 tsp
ityuwa ½ tsp
Umsi wepilisi - 1/2 tsp
I-pepper ye-Chili - 1 tsp
i-olimondi - i-3 tbsp
ioli yomnquma - 1 tbsp
Ijusi le-orange ehlanjululwe ngokutsha-2 tbsp
lwesinaphi "isiBavaria" - 1 tbsp
amanzi ahluziweyo - 3 tbsp
Ubunjwa bamanzi - 10 gr
ityilisi yetyuwa - 1 tsp
Ukucoca ioli kwi-pan enkulu yokupaka kwi-heat ephakathi. Inkukhu ebomvu iphosa, uthele ityuwa, i-pepper kunye neChile powder, uze ufune ukunqanda imizuzu embalwa ngaphambi kokubonakala kwehleko legolide. Susa kwindawo yokushisa kwaye upholise ukushisa.
Isaladi idibanisa zibe ziqwenga zesahluko ezingaqhelekanga, uthathe amagilebhisi ngesiqingatha kwaye ukhululeke ngamatye, nqabisa ushizi ube ngamacube amancinci, amanqatha - amacwecwe amancinci.
Izixhobo ezijoliswe kwi-sauce refueling, efakwe kwi-blender kunye ne-whisk enhle kakhulu.
Ukusabalalisa kwi-plate yokukhonza zonke izithako ezinama-slides amakhulu, uthele ukugqoka kwaye uyithumele kwisiqandisini iiyure eziyi-1.5.
Khonza kwitafile njenge-snack yokutya okanye intlanzi.
Isaladi "I-Rainbow" kunye nemifuno
Isitya sokutya esinomdla olumnandi nolusandulisayo, ngokuqinisekileyo, njengabo ababukele umzobo wabo. Ukubunjwa kubandakanya imifuno kunye neziqhamo ezingekho mveliso, kwaye ukugqoka kufaka amanqaku amnandi kunye anomuncu kwi-saladi.
iklabishi emhlophe - 500 gr
Ubomvu obomvu waseBulgaria - ii-2
i-avocado - ii-2
Imbewu yeempompe - 100 gr
hummus - 1 tbsp + 1 tsp
amanzi - 2 tbsp
ioli ye-alimondi - 1 tsp
isiraphu ye-maple - 1 tsp
i-aple cider viniga-1 tsp
Abaphangi abadlulileyo - 100 gr
Imifuno nezithelo zihlanjululwa kwaye zihlanjululwa kwembewu. Iikroti zixubha kwi-grater enkulu, uthinte i-avocado zibe ziinqununu ezinkulu, kunye neepilisi - imivalo encinci.
Iqabunga leklabishi eyahlukileyo ukusuka kwisiqhumane, uyigqabule, ufefe ioli kunye neviniga, yongeza ityuwa uze uyithumele kwi-ovini imizuzu emi-5 ukuya kwe-10, ufikelele kwi-180 ° C. Iklabishi ephelile kufuneka iqhube kakuhle.
Ukuzalisa, ukudibanisa zonke izithako zamanzi kwigug kwaye uzibethe ngokugqithiseleyo ngemfoloko kude kube lukhulu olunzima.
Kwiphepha le-plate yokukhonza, islayidile iinqununu kwisigqoko, imifuno kunye neziqhamo, ukudibanisa kakuhle ngemibala. Beka iinqununu zabaphangi abaxakekileyo phakathi kwidlo. Phula isaladi ye "Rainbow" ngembewu yeengqungquthela kwaye uyihambise etafileni.
Silungiselela isaladi "Rainbow" ngenyama kunye noshizi
Esi sidlo sicebile kwaye sisityebi, sinambitheka. Inokusetyenziswa kunye nemifuno, imifuno kunye namazambane okanye izitya zecalaal side.
I-curly cheeses kwi-skillet nakwikovini: iipopi ezithandayo kakhulu nesithombe
Iiswisi kwi microwave
Ukupheka okumnandi kwimihla ngemihla
Feng Shui nqwenela ikhadi
Ukwabelana ngesondo akuphelelanga ngokupheleleyo
Isifo sobuhlungu obungapheliyo be-pelvic kubasetyhini
Ngezolo lokutyelelwa kweendwendwe ezivelele
I-Bolero isambatho sehlwaya
Iipropati eziwusizo zeengcawa ze-buckwheat
I-Minimalism - indlela yangaphakathi yokusebenza-2016